Isku aadka wareega 16-ka uefa champions leaugue oo la sameeyay psg vs chelsea, man city vs barcelona dhanka kale….. | Mudug24
Isku aadka wareega 16-ka uefa champions leaugue oo la sameeyay psg vs chelsea, man city vs barcelona dhanka kale…..
Isku Aadka Champions League, Wareegiisa 16-ka, xili ciyaareedka 20-14/2015, waxaana kasoo baxay kulamo culus inkastoo saadaashii ugu badneyd warbaahinta kubada cagta aysan dhicin.
Sida ay sameeyeen saadaaliyayaal badan, waxaa la filayay iney isku beegmaan kooxaha Arsenal vs Real Madrid iyo Sidoo kale Chelsea iyo Juventus, balse ma dhicin oo midkood iskuma aadin walow kulamo kale oo aad u culus ay kasoo baxeen.
Kulamada Culeeska leh ee geerida ah waxaa ka mid ah: Paris Saint Germain vs Chelsea: Iyadoo la xasuusto in labadaan kooxood ay isku fara saareen Champions League-ga xili ciyaareedkii hore wareegiisa Quater Finalka, markaas oo Blues ay si dhibaato badan ugu gudubtay Semi Finalka tartanka.
Sidoo kale Manchester vs Barcelona: Ayaa ka mid ah kulamada maanta kasoo isku aadka lagu qabtay Nyon, waana mid ka mid ah kulamada ugu culus tartankaan iyadoo labadaan kooxood ay isugu dambeysay xili ciyaareedkii hore markaas oo kooxda Barcelona ay kusoo baxday isku cel-celiska (4-1) Wuxuuna ahaa wareega 16-ka.
Si kastaba kulamo kale oo aan la dhayalsan karin ayaa soo baxay waxaana ka mid ah Borrusia Dortmund vs Juventus, halka Arsenal oo koox weyn lala filayay ay ku beegantay kooxda As Monaco ee dalka Faransiiska oo ah koox mudo ka maqneed tartankaan.
Ugu dambeyntii Kooxaha Kaalinta labaad ayaa lagu hormari doonaa gurigooda, waxaana lugta koowaad la ciyaari doonaa 17/18 iyo 24/25 bisha February, halka Lugta labaad la ciyaari doono 10/11 iyo 17/18 bisha March.
Previous articleSababta keentay in ahlusuna ay isaga baxaan gurceel…dhageyso…
Next articleMaamulka puntland oo ka jawaabay hadal dhawaan kasoo yeeray galmudug ee dhanka garoomada…